About us - Hebei Chaoyue Standard Fastener Isikhunta Co., Ltd.
Hebei Chaoyue Standard Fastener Isikhunta Co., Ltd. yasungulwa ngo-2008,
etholakala endaweni yezimboni zhaogeda elokishini le-beihan renqiu Hebei. Umkhiqizi okhethekile wesikulufa nomklami wokwakha ama-moulds. Ngokutshalwa kwezimali okuphelele kwama-dollar ayizigidi ezi-5 ase-US, indawo ehlanganisa umhlaba ka-12800 m2, indawo yokusebenzela yokukhiqiza engu-7200 m2.Duze kweBeijing mayelana ne-150KM, iTianjin mayelana ne-100KM.
UBUQOTHO, AMATALALI, IZINGA ELIHLE, WINA-WINA, SERVICE YAMAKHASIMENDE, ukunamathela kwifilosofi yebhizinisi.Izinikezele ukuqinisa imboni nokwanelisa wonke amakhasimende ngekhwalithi enhle kanye nensizakalo enhle kakhulu.
Olayini bokukhiqiza banesimo semishini esezingeni eliphakeme ye-PVD efakwe kusuka e-USA.
Ezinye izakhiwo ezihambisanayo ukuhlanganisa umugqa ophelele wokukhiqiza, njenge-lathes ye-CNC, i-grinder ezenzakalelayo, i-cnc punch press, i-vaccum lukhuni amaziko, neminye imishini ye-CNC. eminye imishini yokuhlola, ukuqinisekisa ikhwalithi enhle yemikhiqizo.Sinethimba eliqinile lobuchwepheshe kanye neqembu labaphathi, futhi sisebenzise inqubo yokukhiqiza yokulawula ikhompyutha, ukuqalisa ukuphathwa kwamabhizinisi kwamanje.Sisebenzisa ngokunenzuzo ama-softwares akamuva njenge-CAD / CAM, Solidworks , ukwenza ubuchwepheshe obuthuthukisiwe ngonjiniyela abaphezulu, ochwepheshe bokuhlinzeka ngokushisa ukushisa kanye nabaqambi bendlela.
Le nkampani yimisebenzi esemqoka ku-R & D
ukukhiqizwa nokuthengiswa kwe-punch header punch nge-TiAIN enamathela nokwakha isikhunta. Amazinga we-GB, i-JIS, i-ANSI, i-DIN, i-BS, i-ISO.Izitayela zekhanda ezihlanganisa iPhillps, iSlot, iPozi, iHexagon, iTorx. Ikhono lokukhiqiza lonyaka kuze kube yizicucu eziyizigidi ezi-2,5 nge-punch yesibili ejwayelekile.Ngaphezu kwalokho, silwela ngokuqhubekayo ubuciko namasu amasha ukuze kuthuthukiswe isikhunta esinembile, futhi sathola idumela elihle emakethe, Ikakhulukazi isibhakela sesibili sesikulufu se-drywall, i-JDW 270F, i-black coating 12 * 25, ukukhiqizwa kwezikulufo cishe izingcezu eziyi-150,000-180,000.
Imikhiqizo yethu ihlanganisa isibhakela sesibili, i-Main die,
Isibhakela sokuqala, umsiki die, umsiki ummese, Knock-out pin, Intambo ugingqe die, Ukusika die, Wire umdwebo die.All isikhunta for drywall isikulufa, chipborad isikulufa, umshini isikulufa, ngokushaya isikulufa, isikulufa sokhuni, self imishini isikulufa, umshudo namantongomane . Ngaphezu kwalokhu kuchazwa okujwayelekile. Isikhunta esingajwayelekile singaphinde sinikezwe ngamakhasimende adweba nesicelo.
Khetha Chaoyue mould.We ngempumelelo ukunciphisa izithiyo kanye nezindleko ekubumbeni ekukhiqizeni kwakho kanye design.
Ukwaneliseka kwakho ukuphishekela okuphakade kwabo bonke abasebenzi baseChaoyue, sikulungele ukuba ngumlingani wakho onokwethenjelwa nomngane oqotho.